Inuu Kordhiyo Kharashka Webinar-kaaga: Webinar ROI Calculator | Martech Zone
Talaado, Agoosto 26, 2014 Arbacada, Oktoobar 28, 2020 Jenn Lisak Golding
Ma ogtahay taas, celcelis ahaan, Ganacsatada B2B waxay adeegsadaan 13 xeelado suuq geyn oo kala duwan ururadooda? Garan maayo adiga, laakiin taasi waxay isiineysaa madax xanuun kaliya markaan ka fikiro. Si kastaba ha noqotee, markaan runtii ka fikiro, waxaan ka caawinnaa macaamiisheenna inay u soo bandhigaan xeelado badan sanad kasta tiradaasina kor ayey u sii kaceysaa maaddaama dhexdhexaadiyeyaashu noqdaan kuwo aad u dheregsan. Suuq galiyeyaal ahaan, waa inaan mudnaanta siinaa goorta iyo meesha aan ku bixineyno waqtigeenna ama aan waligeen waxba qaban doonin!
Qiyaastii sanad ka hor, waxaan bilownay inaan la shaqeyno ReadyTalk, a webinar madal software, oo waxaan geynay taxane shabakadeena u gaarka ah si aan u aragno waxa buuqan oo dhan uu ku saabsanaa. Waxaan soo saarnay in kabadan 600 oo horseed ah inta lagu gudajiray 3 webinar oo loogu talagalay wada-hawlgalayaashayada, qiyaastii 25 - 30% kamid ahna waxay noqdeen hoggaamiyeyaal aqoon leh. Baahnayn in la sheego, websaydhku wuxuu noqday mid ka mid ah talooyinkayaga ugu sarreeya ee xeeladaha suuqgeynta ee 2014.
Akhrinta dheeraadka ah ee ku saabsan kor u qaadista webinar, ka akhriso maqaalkeyga talooyinka kor u qaadista webinar, 10 Tilmaamood oo lagu kobcinayo Webinar-kaaga xiga.
Markii aan mudnaanta siineyno ololeyaasha suuqgeynta macaamiisheenna, marwalba waxaan fiirineynaa ROI ee dadaalkeenna iyo kuwa u horseedi doona beddelaad badan. In kasta oo aan dhab ahaan u aragnay beddelaadyo websaydhyada, waxaan sidoo kale dooneynay inaan xisaabino ROI. Taasi waa markii aan go'aansanay inaan la shaqeyno ReadyTalk oo aan abuurno kalkuleytar bixiya taas oo kaliya: xisaabinta webinar ROI.
Haddii aad hore u isticmaashay websaydh ama haddaad bilowdo, waxaad u isticmaali kartaa xisaabiyaha si:
Aqoonsiga waxa webinar program-kaaga yahay / kugu kici doono,
Ka hel talooyin si fiican ROI,
Isbarbar dhig qiimayaasha qaybaha oo dhan, iyo
Go'aami sida aad ugu adeegsan karto websaydhka hay'addaada.
Soo hel websaydhkaaga 'ROI' hadda:
Adeegso Xisaabiyaha ROI ee ReadyTalk
Daah-: ReadyTalk wuxuu ahaa macmiil kiina ah oo kafaala qaaday Martech Zone.
Tags: Suuqgeynta WebinarXisaabiyaha ReadyTalkxisaabinta roixisaabiyaha roishirka webkashirarka websaydhkakulanka webkawebinar roi